ပန်းမပွင့်တဲ့အိမ်မက်ဥယျာဉ်
ကိုယ်တိုင်မက်တဲ့အိမ်မက်တောင် ပန်းမပွင့် ခဲ့ပဲ တောင့်တတာတွေများနေခဲ့တယ်။ ဒီနေရာမှာ စိုက်ပျိုးထားတဲ့ကျနော့် ဥယျာဉ်လေးပါ
Gtalk မှာ zawgyi font ပြင်နည်း
Gtalk မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးမယ်ဆို zawgyi font n keyboard install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမည့်အပြင် မိမိ နဲ့ အပြန်အလှန် ချတ်သူမှာလည်း ရှိနေရပါမယ်။
ရှိထားပြီ ဆိုရင်တော့ လွယ်ပါတယ်။ နည်းနည်း ပြင်လိုက်ရုံဘဲ။
Gtalk ရဲ့ setting>general>change font>zawgyi>ok ပြီးပြီဗျာ။ မြန်မာလိုချက်တော့ ပိုပြီး စုံစစေ့စေ့ ပြောလို့ ကောင်းတာပေါ့။
Posted by Nayzar Tun at 10:36 PM 1 comment:
fire fox ကိုပိုမြန်လာအောင် ဘယ်လိုလုပ်မလဲ။
၁။ "about:config" လို့address bar မှာ ရိုက်ထည့်ပြီး Enter ခေါက်ပါ။ warning box တစ်ခု ပေါ်လာပါမယ်။ ဂရုစိုက်လုပ်ပါ့မယ်လို့ရွေးပေးလိုက်ပါ။ ပေါ်လာတဲ့ broswer ရဲ့ အောက်ကိုဆင်းကြည့်ပြီး အောက်ပါ entries များကိုရှာပါ။
ပုံမှန်အားဖြင့် broser သည်တစ်ကြိမ်လျှင် page တစ်ခုကိုသာ resquest လုပ်နိုင်ပါတယ်။pipelining ကို enable လုပ်ထားပါက တစ်ကြိမ်တည်းနှင့် များစွာ resquest လုပ်နိုင် မှာဖြစ်လို့ပိုမြန်လာပါလိမ့် မယ်။
၂။ entries များကို အောက်ပါအတိုင်း ပြင်ပေးပါ။
Posted by Nayzar Tun at 10:55 AM No comments:
(LAN) Local Area Network တစ်ခုတွင် CMD (command Prompt) ကိုသုံးပြီး ကျွန်ုပ်တို့သိလိုသော IP,Sever, Name , Trace စသည်တို့ကို အလွယ်တကူရှာဖွေနိုင်ပါတယ်။
(သင်ဟာ Public Network တစ်ခုတွင် ရှိနေခဲ့မယ်ဆိုလျှင် CMD ( command Prompt) ကို အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် Private address ကို အသုံးပြုတဲ့ (LAN) Local Area Networkများမှာတော့ Destination Sever ကို ရောက်ရှိအောင် User Name , Password များအသုံးပြုရသဖြင့် Advance Software များလိုအပ်မည်ဖြစ်ပါတယ်။)
Public Network အတွင်းအသုံးပြုနေသော သင့်ကွန်ပျူတာမှ Lan Hacking ပြုလုပ်နည်းကို ဆက်လက်ဖော်ပြပါမည်။
ပထမဦးစွာ သင့်ကွန်ပျူတာ၏ Network Connection ကို Right Click နှိပ်ပြီး properties ကိုရွေးပါ။ ထို့နောက်
Posted by Nayzar Tun at 9:53 PM No comments:
Web Site များကို Block လုပ်ခြင်း
Internet explorer သုံးတဲ့အခါမှာ web site အချို့ ကို (ဒါမှမဟုတ်) အားလုံးကို block လုပ်ထားချင်တဲ့အခါမှာ ဒီနည်းလေးက အသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။
Internet Explorer ကိုဖွင့်ပါ။ Internet Explorer>Tool>Internet Option>Connection>Lan setting ကိုအဆင့်ဆင့်ဝင်ပါ။ထို့ နောက် Useaproxy server for your Lan ကို check လုပ်ပါ။
ထို့ နောက်‌ advance ကိုနှိပ်ပါ။ proxy setting dialog box ပေါ်လာပါမည်။
Posted by Nayzar Tun at 8:34 PM No comments:
Google Talk chatback badge
Gtalk လဲသုံး ၊ blog လဲရေး၊ gmail,website လဲ အလွတ်မပေး သုံးစွဲနေ ကြတဲ့ကျွန်တော့ တို့ လို အစုံစား သတ္တ၀ါတွေအတွက် google chatback badge ကသုံးကြည့်သင့်ပါတယ်။သူကတော့ သင့်ဘလော့ဝင်ကြည့်နေတဲ့လူက သင့်ဘလော့ပေါ်ကနေ သင့်ဆီ လှမ်းခေါ်ပြီး chat နိုင်တဲ့ badge တစ်ခုပါ။အခြား သင့် website တွေမှာလဲသုံးနိုင်ပါတယ်။
ပထမဆုံး အောက် ပါ လင့် ကို သုံးပြီး CreateaGoogle Talk chatback badge ပေ့ခ်ျကိုဝင်လိုက်ပါ။
စာမျက်နှာအောက်ဆုံးမှာတွေ့ရတဲ့ HTML code တွေကို ကော်ပီကူးပြီး သင့်ဘလော့မှာ post တင်လိုက်ရင် ရပါပြီ။အခြား website တွေမှာတော့ ကန့် သတ်ချက်တွေရှိပါတယ်။
ဘာတွေဖော်ပြချင်တယ်၊ဘယ်လိုပုံစံတင်ချင်တယ် ဆိုတာတော့ အဲဒီ ပေ့ခ်ျပေါ်မှာပဲ edit လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Posted by Nayzar Tun at 10:32 PM No comments:
ကျွန်တော့ကို ဘယ်သူတွေ ဘလော့ထားလဲ
Gtalk မှာသင့်ကို ဘယ်သူတွေကများ block လုပ်ထားလဲဆိုတာကို သိချင်ခဲ့ရင်တော့ pidgin-2.5.3 ကိုသုံးပြီးသိအောင်လုပ်နိုင်ပါတယ်။ gtalk မှာတော့ off line အနေနဲ့မြင်နေရမှာဆိုတော့ block လုပ်ထားတာလား၊ online မတတ်တာလား မခွဲခြားနိုင်ပါဘူး။
pidgin-2.5.3 ကိုအောက်ပါ လင့် မှာ ဒေါင်းလုပ်ချနိုင်ပါတယ်။freedownload ပါပဲ။
နောက် သင့် computer မှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ Gtalk ကိုသူ့ ထဲမှာပေါ်အောင် Add လုပ်ဖို့ လိုပါမယ်။
၁။ start>program>pidgin ကိုဖွင့်ပါ။ buddy list box ပေါ်လာပါမည်။
Posted by Nayzar Tun at 9:48 PM No comments:
ဤမှ စ ကာ၊ ချစ်ခဲ့ရာဝယ်
တွေးကြောက်သည်မို့ ၊ “ ဒို့ " စိုးထိတ်လျက်
အမုန်းမှိုင်းတို့ ၊ ၀င်ရောက်လို့ သာ
အဆွေးရက်များ တမ်းတမိ။ ။
Posted by Nayzar Tun at 11:17 PM No comments:
Gtalk မှာ zawgyi font ပြင်နည်း Gtalk မှာ ဇော်ဂျီနဲ့ ရေးမယ်ဆို zawgyi font n keyboard install လုပ်ပြီးသားဖြစ်ရမည့်အပြင် မိမိ နဲ့ အြ...
နေတတ်ပါစေ..... ဘာမှဝမ်းမနဲ နဲ့.... လောကမှာ ပန်းတိုင်းပွင့်ရင် နေရထိုင်ရ...ခက်မှာပေါ့ ။
တ ကယ်တမ်း ရေနစ်တော့ ဆွဲယူစရာကောက်ရိုးတစ်မျှင်တောင် မရှိဘူး ငါဘယ်လောက်ထိ မျောနေမလဲ ဒါမှမဟုတ် မျှောနေနိုင်မလဲ။ ငါ ရှူသွင်းထားတဲ့...
ဂျီတော့သုံးရင်းပျော်မွေ့ ပါစေ……. ကျွန်တော် G talk သုံးရင်း ရှာဖွေဖတ်ရှုမိတာလေးတွေ သူငယ်ချင်းတွေကို ပြောပြချင်လို့ဒါလေးကို blog ...
လိုအပ်မယ်ထင်လို့ရှိစုမဲ့စုလေးထဲက ဖဲ့ဖဲ့ပေး ခဲ့ရတာ………။ တစ်ခုခုတော့ပြန်ပေးပါ… ငါတောင်းတာ…. ကွမ်းတစ်ယာ၊ရေတစ်မှုတ်မဟုတ် မင်းသမီးတော်ရဲ့ ပန်းကု...
တကယ်တော့ ပေးလို့လဲမရ..... ကျွေးလို့ လဲ မ၀ နိုင်ဘူး..... သေချာတွေးကြည့်မှ.... သုံညတောင်...ရှိမရှိ မသေချာဘူး.... ကဲ ..သေချာလား...မင်းမှ...
လိုအပ်‌ချက်( j'ai besoin de toi)
When you feel all alone Andaloyal friend is hard to find You're caught inaone way street With the monsters in your head When ho...
၆။ Google မှာ home page ထူးထူးဆန်းဆန်းလေးတွေ ရှိနေပါတယ်။ အသုံးဝင်လှတာ မဟုတ်ပေမဲ့ သဘောကျစရာပါ။ စိတ်ပြေလက်ပျောက်ကြည့်လို့ ရတာပေါ့။ (က) goog...
Web Site များကို Block လုပ်ခြင်း Internet explorer သုံးတဲ့အခါမှာ web site အချို့ ကို (ဒါမှမဟုတ်) အားလုံးကို block လုပ်...
LAN HACKING (LAN) Local Area Network တစ်ခုတွင် CMD (command Prompt) ကိုသုံးပြီး ကျွန်ုပ်တို့သိလိုသော IP,Sever, Name , Trace စသည်တို့...
အောက်က လင့်လေးနှိပ်ပြီး ကျနော့် ကို ခေါ်လိုက်ပါ။ ။
နန်းရအောင်ရဲ့profile များ
နန်းရအောင်ရဲ့friendster
နန်းရအောင်ရဲ့hi5
နန်းရအောင်ရဲ့myanmarspace
you tube မှ download လုပ်ရန်
ဘောလုံး ၊ ဘောလုံး